DEG DEG:- Nin ku dhex dhacay Warta-siigaale oo nolol iyo geeri weli lagu la’yahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Nin ku dhex dhacay Warta-siigaale oo nolol iyo geeri weli lagu la’yahay
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baadi-goob culus ugu jira nin la sheegay inuu ku dhex dhacay Warta-siigaale oo ah goob ay biyo fariistaan oo ku taalo degmada Hodon ee magaalada Muqdisho.
Duhurnimadii maanta ayaa nin ka tirsan dadka deegaanka degmada Hodon oo maraayay Warta-siigaale si kedis ah ugu dhacay Wartaas, waxaana ilaa iyo haatan lagu weysan yahay nolol iyo geeri midkee ahaataba.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka nabad-sugidda ay goobtaasi geeyeen wiishashka dhaadheer oo ka qeyb qaadanaya baaritaanka ninka ku dhex dhacay Warta-siigaale oo ilaa iyo haatan la weysan yahay.
Ninkaasi ayaa loo maleynayaa in dhoobada Warta hoosteeda ah ay ku dhagtay islamarkaana uu awoodi kari waayay inuu kasoo baxo, waxaana loo badinayaa in ninkaasi uu geeriyooday.
Dhinaca kale, dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay goobta ay weli ka socoto raadinta ninkaasi, waana meel buux dhaaf noqotay oo ay isugu tagaan biyaha ka yimaada degmooyinka Waaberi iyo Hodon ee magaalada Muqdisho